Home Wararka Dowladda Qatar oo lagu wado in aay heshiis dhex dhigto Rooble...
[XOG] Dowladda Qatar oo lagu wado in aay heshiis dhex dhigto Rooble & Fahad
Sida ilo wareedyo ka tirsan Safaaradda Somalia ee Dooxa ay MOL u xaqiijiyeen waxaa lagu wadaa in maalmaha soo socda aay booqasho ku tagaan magaalada Dooxa RW Rooble iyo Fahad Yasin, safarkaan ayaa waxaa ka shaqeeyay dowladda Qatar oo daneeyneysa in ay heshiis dhex dhigto Rooble iyo Fahad sida MOL loo xaqiijiyay.
Qatar ayaa rabta in saaxiibkood Fahad Yasin aay ka badbaadiyaan qatarta siyaasadeed iyo midda Maxkamadeed ee soo food saartay.
Rooble ayaa aqbalay casuumadda Qatar, kaddib markii uu Rooble codsaday lacagta Doorashada oo dhan $40 Milyan Dowladda Qatarna aay ogolaatay bixinta lacagtaas. Waxaa sidoo kale MOL aay ogaatay in toddobaadyo ka hor aay tageen magaalada Dooxa Xaaska RW Rooble iyo carruurtiisa oo halkaas laga siiyay Guri weyn oo degenaasho ah.
Lama oga sida uu ka yeeli doono Rooble kiiska Ikraan, waxaana loo badinayaa in uu Rooble soo qaato heshiis taasoo uu gabbaad ka dhigan doono qabashada Doorashada, halkaasoo hakad weyn uu geli doono baaritaanka iyo caddaalad u helidda Ikraan Tahliil Faarax.